Danjire Sidikou oo dhallinyarada ugu baaqay ka qeyb qaadashada horumarka dalka – Radio Muqdisho
Danjire Sidikou oo dhallinyarada ugu baaqay ka qeyb qaadashada horumarka dalka
Wakiilka Gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Danjire Maman Sidikou ayaa ku booriyay dhallinyarada Soomaaliyeed inay door fir-fircoon ka qaataan dadaallada ku aadan dib u dhiska iyo horumarinta dalka.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Danjire Maman Sidikou ayaa lagu sheegay in dhallinyarada Soomaaliyeed looga baahanyahay inay ka faa’iideystaan xuska maalinta caalamiga ah ee dhallinyarada, ayna ka qeyb qaataan horumarinta dhaqaalaha, siyaasadda iyo dhanka arrimaha bulshada, isla markaana door ku yeeshaan hiigsiga 2016-ka.
“Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa looga fadhiyaa inay muujiyaan codkooda iyo aragtidooda ku aadan xasilinta iyo ka shaqeynta amniga dalka, ayna ka fogaan waxkasta oo u horseedi kara inay qeyb ka noqdaan falalka ay maleegayaan maleeshiyaadka argagixisada ah Al-Shabaab”ayuu yiri Danjire Sidikou.
War-saxaafadeedka ayaa dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya looga codsaday inay la timaado qorshe ku aadan siyaasadda dhallinyarada ee ku saabsan ka qeyb qaadashada horumarka dalka.
Dhanka kale qaar ka mid ah gobolada dalka waxaa ka socda xuska maalinta caalamiga ah ee dhallinyarada, kuwaasi la qorsheynayo inay ka qeyb galaan mas’uuliyin kala duwan, si looga hadlo doorka dhallinyarada uga aadan ka qeyb qaadashada amniga.
Xuska maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada oo ka socoto Muqdisho